mardi, 10 septembre 2019 09:38
Papa Fransoa: Handao tanteraka an’i Madagasikara
Ny nosy Maorisy no namarana tanteraka ny fitsidihana Apostolika faha-31 nataon’i Papa Fransoa. Omaly izy no nitarika lamesa lehibe tao Port Louis, ary niverina teto Madagasikara ihany ny hariva.
Rallye - Tour de Tana: Fiara telopolo no hifaninana
Hotanterahina manomboka ny alakamisy 12 septambra izao ny Rallye « Tour de Tana » andiany faha-19. Miisa 30 ireo fiara handray ny fiaingana hifaninana amin’izany.
mardi, 10 septembre 2019 08:56
Fanadinana BEPC: 21 467 ireo mpiadina manerana an’i Vakinankaratra
Nilamina ny fanombohan’ny fanadinana BEPC tamin’ireo fari-piadidiam-pampianarana miisa fito ato amin’ny faritra Vakinankaratra omaly alatsinainy 09 septambra, hoy ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena, ny fanofanana teknika sy arak’asa DRENTP Vakinankaratra, Rakotoarimanana Heriniaina.
Miisa 21 467 ny mpiadina voasoratra anarana ka ato amin’ny Cisco Antsirabe ny 5 706 amin’ireo. Mitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 78 manerana ny faritra izy ireo. 9 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpiadina, izay avy any amin’ny Cisco Mandoto, ary 51 taona no zokiny indrindra avy ao Betafo.
mardi, 10 septembre 2019 08:45
Fifidianana Ben’ny tanàna: Tsy ampy zato ireo kandida nanatitra firotsahan-kofidiana
Mihisatra ny fanaterana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon’ny OVEC manerana ny Nosy. Raha ny omaly hariva dia Kaominina miisa 81 amin’ny 1695 no misy mpirotsaka ho fidiana, ka kandida tsy miankina ny 75 amin’ireo.
Nanentana ireo antoko sy vondrona antoko ny Vaomiera mahaleotena momba ny fifidianana na CENI, tamin’ny alalan’ny mpampakateny ankapobeny Razafindraibe Ernest, mba tsy hiandry ny fotoana farany ny 12 septambra 2019, amin’ny 5 ora hariva, hikatonan’ny fandraisana antotan-taratasy firotsahan-kofidiana eny anivon’ny OVEC, sao misy tsy fahampiana dosie ka ho tara na mety hitarika tsy fahafaha-mifaninana amin’ny fifidianana.